Coronavirus oo sababay dhimashada 475 qof gudaha Talyaaniga 24kii saac ee la… – Hagaag.com
Coronavirus oo sababay dhimashada 475 qof gudaha Talyaaniga 24kii saac ee la…
Posted on 19 Maarso 2020 by Admin in World // 0 Comments
Coronavirus (Covid-19) ayaa wuxuu sababay dhimashada 475 gudaha Talyaaniga 24-kii saac ee la soo dhaafay tiradii ugu badneyd oo ku dila hal waddan maalin gudaheed, sida ay Arbacadii shaacisay Difaaca Madaniga.
Tirada dhimashada ayaa gaareysa dalka Talyaaniga 3000 oo u dhintay cudurkan, tiradan ayaa ku dhow tii laga diiwaan geliyey Shiinaha (in kabadan 3,200 oo dhimasho ah) halkaasoo “Covid-19” asal ahaantiisa ka soo muuqday.
Adeegyada caafimaadka ee Talyaanigu waxay diiwaangeliyeen 4,207 oo soo ritay cudurka oo cusub 24-kii saac ee la soo dhaafay, tiradaas oo kale oo aan horey loo diiwaan gelin.
Sidaasi darteed tirada u dhimatay coronavirus dalka talyaaniga ayaa ah 7% tirada guud ee dadka cudurka uu ku dhacay, markale gobolka Lombardy ayaa ah kan ugu badan ee uu cudurku saameeyay, iyada oo saddex meelood meel dhimashada laga diiwaangeliyay iyada.
Tirada dadka soo ritay ee cusub ayaa sidoo kale ku kordhay gobollada kale ee Quineto iyo Piedmont, iyada min 500 kiis oo dheeri ah laga diiwaangaliyay gobol kasta, halka Tuscany ay diiwaan-galisay 300 kiis oo dheeri ah.
Rikoodhkii ugu dambeeyay ee maalintii Axada ayaa ahaa 368 dhimasho ah, waa mid aan lagu arkin Shiinaha xataa sida tirooyinka rasmiga ay sheegayaan.